यो तपाइँको वर्ष-अन्त मार्केटिंग समीक्षा को लागी समय हो Martech Zone
यो तपाईंको बर्ष-अन्त मार्केटिंग समीक्षाको लागि समय हो
बुधबार, डिसेम्बर 9, 2009 शनिबार, अक्टोबर 18, 2014 Douglas Karr
यो फेरि वर्षको त्यो समय हो ... जब तपाईं पर्छ तपाइँको वार्षिक मार्केटिंग योजना समीक्षा गर्न समयलाई अलग राख्नुहोस्। अर्को वर्ष सामाजिक मिडिया रणनीतिहरूको छिटो अपोल्नेको साथ अघिल्लो वर्ष भन्दा बढि महत्वपूर्ण हुन सक्छ। मैले संकलन गर्न सिफारिस गरेको यहाँ छ:
मध्यम मार्केटिंग खर्च - यो बाह्य मार्केटिंग र विज्ञापन प्रयासहरूको लागि भुक्तान गरिएको वास्तविक पैसा हो। कोटिहरूमा यसको भत्काउनु पनि आवश्यक छ। अर्को शब्दहरु मा, 'अनलाइन' मात्र सूची नगर्नुहोस्… अनलाइन बिच्छेदन वेब साइट को लागी, खोज इन्जिन मार्केटिंग, सामाजिक मिडिया, आदि।
मार्केटिङ संसाधन मध्यम द्वारा खर्च गरिएको - यो मानव जनशक्ति साथै आपूर्ति र उपकरणमा आन्तरिक स्रोत लागत हो। फेरि, प्रत्येक मध्यम कम तल्लो सामान्य डिनोमिनेटरमा तोड्न निश्चित गर्नुहोस्।
मध्यम अधिग्रहण वा उत्पादन बिक्री - यो दुबै गणना र मध्यम रकम जम्मा हुने राजस्व रकम हो ... दुबै सन्दर्भ र मुखको शब्द समावेश गर्दछ। कति ग्राहकहरु, साथै ती ग्राहकहरुको मूल्य बुझ्दै, अर्को बर्षको योजनाको लागि आवश्यक छ। केहि माध्यमहरु सानो गणना ल्याउन सक्छ ... तर धेरै ठूलो सम्झौता।
माध्यमबाट ग्राहक प्रतिधारण - यसले केही थप मेहनत लिन सक्छ, तर बुझ्नुहोस् तपाईंको कम्पनीले के गरिरहेछ जुन तपाईंको ग्राहकहरूको अवधारणालाई असर गर्दैछ। धेरै चोटि शैक्षिक कार्यक्रमहरू र परामर्शहरू खर्चको रूपमा देखिन्छन्। तपाईंले कुनै सेवा बिना प्रदान गरेको सेवाहरूको मूल्य पहिचान गर्नुहोस् ... तपाईं यहाँ धेरै लाभहरू देख्न सक्नुहुनेछ!
वर्षको तुलनामा वर्ष तुलना - तपाईंको बजार रणनीतिहरू गत बर्षको तुलनामा कसरी प्रदर्शन गर्‍यो? तपाईं बिल्कुलै शर्त लगाउन सक्नुहुन्छ कि यो अर्को बर्ष परिवर्तन हुनेछ। तपाईंको मिडिया मिक्स, स्रोतहरू र रणनीतिहरू परिवर्तन गर्नाले लगानीमा तपाईंको विपणन फिर्ताको वृद्धि हुनेछ।
एक वर्ष अन्त विपणन समीक्षा बन्द नगर्नुहोस्। धेरै कम्पनीहरूले मार्केटिंगमा पैसा खर्च गर्छन् जहाँ उनीहरूसँग स्रोतहरू छन्, जहाँ तिनीहरू लाग्छ राजस्व आउँदैछ, वा जहाँ तिनीहरू सजिलै सहज छन्। एक वर्ष अन्त समीक्षा प्रदर्शन तपाइँ एक नयाँ, विजयी रणनीति को साथ अर्को साल हमला गर्न को लागी उपकरण प्रदान गर्नेछ!
टैग: विश्लेषणवार्षिकवार्षिक रिपोर्टबर्षको अन्त्यमार्केटिंग प्रश्नहरूमार्केटि review समीक्षानयाँ वर्षवर्षौं बर्षवर्ष अन्त समीक्षा
सामाजिक मिडिया अनुकूलनको छ डिग्री
तपाईले खोज ईन्जिनहरूमा के फेला पार्नुभयो?